I-Avanafil (330784-47-9) Umzi mveliso wabaxhasi bemveliso
I-Avanafil isetyenziselwa ukunyanga ukungasebenzi kwe-erectile (i-ED: ukungabi namandla; ukungakwazi ukufumana okanye ukugcina i-erection emadodeni). I-Avanafil ikudidi lwamayeza abizwa ngokuba yi-phosphodiesterase (PDE) inhibitors. Isebenza ngokwandisa ukuphuma kwegazi kwilungu lobudenge ngexesha lokuvuselela ngokwesondo. Ukuhamba kwegazi okwandisiweyo kunokubangela ukubakho. I-Avanafil ayiphilisi ukungasebenzi kwe-erectile okanye ukwandisa umnqweno wesondo. I-Avanafil ayikuthinteli ukukhulelwa okanye ukwanda kwezifo ezosulela ngokwabelana ngesondo ezifana ne-HIV. ngexesha lonke lokwabelana ngesondo. Nxibelelana nodokotela okanye ugqirha wakho wemithi ukuze ufumane ezinye iinkcukacha.
Ulwazi lweSiseko se-Avanafil
igama Avanafil powder
Isisindo somzimba 483.95g / mol
I-Molecular Formula C23H26ClN7O3
Ngaba uyazi ukuba ngaphezulu kwesigidi se-30 samadoda e-United States ane-erectile dysfunction (ED)? Oko kuchaza ukuba kutheni uninzi lwamayeza e-ED athengiswa e-US. Elinye lala machiza yiAvanafil. UStendra ngu Igama le-avanafil ukuze uyazi.
IAvanafil (iStendra) yi-PDE-5 (i-phosphodiesterase-type 5) inhibitor ethintela i-PDE-5.
Xa uthatha eli chiza, liya kuyolisa imithambo yegazi kunye nezihlunu emzimbeni wakho ukukunceda ufumane ulwakhiwo ngokwandisa ukuhamba kwegazi kwilungu lobudoda. Ngesi sizathu, isetyenziselwa ukunyanga ukungasebenzi kakuhle kwe-erectile (ED). Njenge-Levitra® (vardenafil), Cialis® (tadalafil), kunye neViagra® (sildenafil), i-avanafil iya kwenza kube lula kuwe ukuba umise kwaye ugcine ulwakhiwo kangangexesha elithile.
IAvanafil (iStendra®) intsha, iphuhlisiwe kwiminyaka ye-2000 nguMitsubishi Tanabe Pharma eJapan. I-United States yokutya kunye noLawulo lweeDrug (FDA) yalwamkela ichiza ngo-Epreli 2012 kunyango lwe-ED, ngelixa i-Arhente yamaYeza yaseYurophu (i-EMA) yalwamkela ngoJuni 2013.
Ukusuka ezininzi uphononongo lweAvanafilUya kuqaphela ukuba ineziphumo ebezingalindelekanga ezimbalwa xa kuthelekiswa neLevitra, Cialis, Viagra, kunye namanye amayeza e-ED.
Masambe nzulu kwaye sifumanise okungakumbi malunga neli chiza.
I-Avanafil ilungisa njani ukungasebenzi kakuhle kwe-Erectile
Avanafil isetyenziselwa ukunyanga i-ED okanye ukungabi namandla, okuchazwa njengokungakwazi ukufumana kunye nokugcina ulwakhiwo. I-Avanafil iwela kudidi lwamachiza athintela i-phosphodiesterase.
Qaphela ukuba ukuze ufumane ulwakhiwo, imithambo yegazi yakho ye-penile izaliswa ligazi. Oku kuyenzeka xa ubukhulu beenqanawa zegazi bonyuka, ngaloo ndlela kugqithiselwa igazi ngakumbi kwilungu lobudoda. Kwangelo xesha, ubungakanani bemithambo yegazi ethatha igazi kwilungu lakho lobudoda luya kuncipha kungoko kuqinisekisa ukuba igazi lihlala ngakumbi kwimisipha yakho ye-penile, ngaloo ndlela kugcina ulwakhiwo ixesha elide.
Xa ukhuthazwa ngokwesondo, kuya kufuneka ufumane ulwakhiwo. Olu lwakhiwo luya kwenza ukuba i-penis yakho ikhuphe i-nitric oxide, ikhompawundi eya kubangela i-guanylate cyclase (i-enzyme) ivelise i-cGMP (cyclic guanosine monophosphate), isithunywa esibalulekileyo esilawula iinkqubo ezininzi zomzimba.
Ngokwenyani yile cyclic nucleotide enoxanduva lokuphumla kunye nokuncipha kwemithambo yegazi ethwala igazi lisuka kwilungu lobudoda ukuze lenze ulwakhiwo. Xa enye i-enzyme itshabalalisa i-cGMP, imithambo yegazi iya kubuyisa ubungakanani bayo bokuqala obangela ukuba igazi liphume kwilungu lobudoda, kwaye oko kuya kuphawula ukuphela kolwakhiwo.
Xa uthatha i-avanafil, iya kuyeka i-PDE-5 ekonakaliseni i-cGMP, oko kuthetha ukuba i-cGMP iya kuhlala ixesha elide igcine ulwakhiwo lwakho. Ixesha elide i-cGMP ihlala, igazi liya kuhlala ixesha elide kwilungu lakho lobudoda kwaye ixesha elide ulwakhiwo lwakho luya kuthatha.
Ngaba iAvanafil (Stendra) iyasebenza ekunyangeni ukungasebenzi kakuhle kwe-Erectile?
Nangona i-avanafil (iStendra) iyeza elitsha le-ED, uninzi lwezifundo lubonisa ukusebenza kwayo kunyango lwe-ED. Kwezinye izifundo ezintlanu ezenziwa ngo-2014 ukufumanisa ukuba ingaba eli chiza liyasebenza na, ngaphezulu kwamadoda angama-2,200 XNUMX athatha inxaxheba, kwaye onke ayene-erectile dysfunction.
Ekupheleni kwezifundo, i-avanafil yafunyanwa isebenza kakuhle ekuphuculeni i-IIEF-EF, isalathiso samazwe aphesheya esetyenziselwa ukuvavanya iingxaki ezinxulumene nolwakhiwo.
Onke amadoda athabathe eli chiza abonise ukuphucuka okumangalisayo kwi-IIEF-EF yabo kwiidosi ezisusela kwi-50 ukuya kwi-200mg. Iziphumo zophando zikwabonise ukuba i-avanafil yayisebenza ngakumbi kwiidosi eziphezulu ze-200mg. Oku kwahlula i-avanafil kwezinye iziyobisi ze-ED ezibangela iziphumo ebezingalindelekanga kwiidosi eziphezulu.
Kwesinye isifundo esenziwe kwi-2012, i-avanafil yafunyanwa inyamezeleke kwaye isebenza kakuhle kunyango lwe-ED. Amadoda amabini athe athatha inxaxheba kolu phando abonisa ukuphucuka okumangalisayo kwiidosi eziphakathi kwe-100 ukuya kwi-200mg.
Kuvavanyo lweklinikhi olubandakanya i-avanafil, abaphandi baxela ukuba ibonakalisa ukonyuka okubalulekileyo kuzo zonke izinto ezinxulumene nokusebenza kwe-ED. Ezi zilingo zazibandakanya amadoda angaphezu kwama-600 kubakaki beminyaka engama-23 - 88.
Ngamafutshane, i-avanafil iyasebenza kunyango lwe-ED. Izifundo ezininzi ziye zafakazela ukuba inokuvelisa ukuphucuka okungqinisisekayo kunye nokubalulekileyo kulwakhiwo lwawo onke amadoda ane-ED, ngaphandle kweminyaka yabo.
Yiyiphi engcono Avanafil okanye iTadalafil?
I-Avanafil lelona chiza litsha lika-ED kwintengiso, kodwa lenza ngcono kunamayeza amandulo e-ED. Zombini iAvanafil okanye iTadalafil zisetyenziselwa ukunyanga ukungasebenzi kakuhle kwe-erectile, kodwa zinomahluko kwindlela yokusebenza kwazo.
Ngelixa i-tadalafil (i-Cialis) sisisombululo esisebenzayo kuzo zombini i-Prostate eyandisiweyo kunye neempawu zokungasebenzi kakuhle, i-Stendra ihlala ikhethwa kuqala kwabo bane-erectile dysfunction.
IAvanafil vs Tadalafil: Yeyiphi esebenza ngokukhawuleza?
I-Tadalafil kunye nezinye iziyobisi ze-erectile dysfunction zithatha phakathi kwemizuzu engama-30 ukuya kwiyure enye ukuze zivakale. Kwaye kwezinye iimeko, emva kokuba utye into enzima, iziyobisi zinokuthatha ngaphezulu kweyure enye ukuqala ukusebenza. Oku akunjalo nge-avanafil.
Ukuba uthatha phakathi kwe-100 ukuya kwi-200mg yemveliso, uya kuziva isiphumo se-avanafil kwimizuzu eli-15. Intsingiselo unokuyithatha nje imizuzu embalwa ngaphambi kokuba uqale ukwabelana ngesondo. Nokuba uthatha idosi esezantsi ye-avanafil, yithi 50mg, uya kufumana ulwakhiwo ngaphakathi kwemizuzu engama-30.
I-Avanafil vs Tadalafil: Nguwuphi omnye oneziphumo ebezingalindelekanga ezimbalwa?
Nangona i-avanafil ineziphumo ebezingalindelekanga, ezi ziphumo bezingalindelekanga azininzi kangako njengezo ze-tadalafil. Inkqubo ye- Iziphumo ebezingalindelekanga ze-avanafil Kananjalo azikho mbi njengezo ze-tadalafil. Umzekelo, i-avanafil ayinakubangela uxinzelelo lwegazi kunye nokubona okungalunganga; Iziphumo ezibini ezinxulumene ne-tadalafil kunye namanye amayeza e-ED.
Olunye uncedo lwe-avanafil kukuba inokuthathwa kwiidosi eziphezulu ngaphandle kokubangela naziphi na iziphumo ebezingalindelekanga. Ngapha koko, iidosi eziphezulu ukuya kuthi ga kwi-200mg zinokuthathwa ngaphandle kokukhathazeka malunga nayiphi na imiphumela emibi.
I-Avanafil isebenza ngokwahlukileyo kwi-tadalafil kuba ijolise kwi-enzyme ye-phosphodiesterase-type 5, ngaphandle kokuhlasela ezinye ii-enzyme ze-phosphodiesterase ezinje nge-PDE11, PDE6, PDE3, kunye ne-PDE1.
I-Avanafil ayichaphazeleki kukutya.
I-Tadalafil kunye nezinye iziyobisi zokuqala ukungasebenzi kwe-erectile zihlala zingasebenzi kakuhle emva kokutya ukutya okukhulu kokutya okunomxholo onamafutha aphezulu. Oku kwenza ukuba kube ngumceli mngeni omkhulu ukuzisebenzisa kuba kufuneka ubeke esweni ixesha lakho lokutya kwaye ubenako nokuba novakalelo malunga nokutya.
Kwelinye icala, i-avanafil ayichaphazeleki kukutya okutyiweyo, oko kuthetha ukuba uyokonwabela isiphumo se-avanafil nokuba ungatya nini kwaye utye ntoni. Ngesi sizathu, kubangcono ukutya ukutya okuphezulu kwamandla ngaphambi kokusebenzisa eli yeza ukuze ube namandla ngokwaneleyo ekusebenzeni kwakho ngokwesondo.
I-Avanafil vs Tadalafil: Yeyiphi enokusetyenziswa kunye notywala?
Kuyacetyiswa ukunciphisa okanye ukunqanda utywala xa usebenzisa iyeza le-tadalafil. I-Tadalafil yaziwa ngokunciphisa uxinzelelo lwegazi, ke ukuyithatha kunye notywala kunokuhlisa uxinzelelo lwegazi ukuya kumanqanaba abukhali.
Ukuthatha eli chiza kunye notywala kunxulunyaniswa neempawu ezinje ngokubetha kwentliziyo, iintlungu, ukugungxula, ukuphelelwa ngamandla, iintloko, kunye nesiyezi. Kwelinye icala, i-Stendra ikhuselekile kakhulu ukuba ungayisebenzisa, nokuba sele usele utywala. Ungonwabela ukuya kuthi ga kwisithathu sotywala ngaphambi kokuthatha iStendra, kwaye ngekhe kubekho naziphi na iziphumo ebezingalindelekanga kunye neminye imingcipheko kwimpilo yakho.
Nangona kunjalo, oku akuthethi ukuba ungaya kwi-binge emva koko usebenzise iStendra. Kuya kufuneka usebenzise utywala ngokumodareyitha kuba notywala uqobo bukwabangela iingxaki zempilo. Utywala buyadambisa, kwaye xa ubusebenzisa kakhulu, buya kunciphisa umnqweno wakho wesini kwaye kukwenze kube nzima kuwe ukufumana ulwakhiwo. Kuthetha ukuba utywala buyayiyeka into yokuba amayeza e-ED ajolise ekufezekiseni.
Njengoko kunokubonwa, iAvanafil inezibonelelo ezininzi ngaphezulu tadalafil. Kungenxa yoko le nto uninzi lonyango luthanda ukukunika izigulana.
Zeziphi ezinye iziyobisi Ukuchaphazela iAvanafil?
Ngelixa amanye amayeza engenakusetyenziswa ngokudibeneyo, amanye anokudityaniswa ukuphucula ukusebenza kwawo. Iziyobisi ezingenakudityaniswa zezo zinxibelelana kwaye zibangela iziphumo ezibi. Kungenxa yoko ngaphambi kokuba ubeke naliphi na iyeza, yazise ukuba sele ukwenye ichiza. Oku kufanele ukuba kube njalo ukuba ufuna ukutshintsha iziyobisi okanye idosi. Sukwenza nantoni na ngokwakho ngaphandle kokubandakanya umboneleli wakho wezempilo.
Umzekelo, ucetyiswa ngamandla ukuba ungasebenzisi i-avanafil ngokudibanisa neziyobisi ezinje ngeLevitra, Staxyn (vardenafil), tadalafil (Cialis), okanye Viagra (sildenafil). La machiza asetyenziselwa ukunyanga i-ED kunye noxinzelelo lwegazi (pulmonary). Ke ukuzisebenzisa kunye ne-avanafil kunokulayisha ngaphezulu umzimba wakho kwaye kubangele iziphumo ebezingalindelekanga ezibi.
Ngaphambi kokuba uqale ukusebenzisa i-avanafil, yazisa umboneleli wakho wezempilo ukuba ngaba uthatha nawaphi na amanye amayeza, ngakumbi:
Amachiza asetyenziselwa ukunyanga ukungasebenzi kakuhle kwe-erectile.
Naziphi na i-antibiotics ezifana ne-telithromycin, i-erythromycin, i-clarithromycin kunye nezinye
Onke amayeza okubola, phakathi kwawo ketoconazole, itraconazole, kunye nezinye
Nasiphi na isiyobisi esisetyenziselwa unyango lweprostate disorder okanye uxinzelelo lwegazi oluphezulu, kubandakanya i-tamsulosin, terazosin, silodosin, prazosin, doxazosin, alfuzosin, kunye nezinye.
Iziyobisi ze-Hepatitis C ezifana ne-telaprevir kunye ne-boceprevir kunye nezinye.
Amachiza e-HIV / AIDS afana ne-saquinavir, ritonavir, indinavir, atazanavir, kunye nezinye.
Olu luhlu lungentla alunabubanzi. Kukho ezinye iziyobisi ezinje ngeDoxazosin kunye neTamsulosin ethi xa isetyenziswa kunye ne-avanafil izakubangela iziphumo ebezingalindelekanga ezibi. Ukongeza, ezinye izinto ezingaphaya kwekhawuntareni kunye neziyobisi ezichongiweyo zinokusebenzisana ne-avanafil. Oku kubandakanya iimveliso zamayeza kunye neevithamini. Eyona nto iphambili kukuba ungasebenzisi naliphi na ichiza ngokudibanisa ne-avanafil ngaphandle kokwazi ugqirha wakho.
Ayizizo iziyobisi kuphela omele ulumke ngazo, kodwa kufuneka ulumke xa uneemeko zonyango ezisisiseko. Ngaphambi kokuba usebenzise i-avanafil, yazisa ugqirha wakho ukuba unayo nayiphi na kwezi ngxaki zonyango zilandelayo.
Ilungu lobudoda elingaqhelekanga- ukuba uneepenji egosogoso okanye incanca yakho ineziphene ezithile zokuzalwa, kukho amathuba aphezulu okuba impilo yakho inokuchaphazeleka xa usebenzisa i-avanafil.
Ukuba uneminyaka engama-50 ubudala okanye ngaphezulu
Ukuba uphethwe yidiski egcweleyo, isifo semithambo, okanye amehlo akho anesilinganiselo esiphantsi sendebe ukuya kwidiski, kwaye ukuba unesifo sentliziyo okanye isifo seswekile, amanqanaba aphezulu anamafutha egazini (Hyperlipidemia) okanye igazi eliphezulu uxinzelelo (uxinzelelo lwegazi).
Ezinye iimeko ekufuneka uzizise kugqirha wakho zibandakanya:
Iingxaki ezinzima zamehlo
Intlungu ebuhlungu yesifuba (angina)
Ukubetha kwentliziyo ngokungaqhelekanga (arrhythmia)
Iingxaki ngemithambo yegazi efana ne-idiopathic subaortic stenosis okanye i-aortic stenosis
Ukuhlaselwa sisifo sentliziyo kwiinyanga ezintandathu ezidlulileyo.
Stroke kwiinyanga ezintandathu ezidlulileyo
Umhlaza onxulumene negazi (i-leukemia okanye i-myeloma eninzi)
I-Sickle-cell anemia, phakathi kwabanye
I-PDE5 inhibitors, iStendra ibandakanyiwe, inxibelelana nezinye ze-CYP3A4 inhibitors kunye ne-alpha-blockers. Ngesi sizathu, kubalulekile ukuba ugqirha wakho azi ukuba usebenzisa la mayeza. Ngokubanzi, i-avanafil iyimveliso esebenzayo nekhuselekileyo kunyango lwe-ED.
I-Avanafil isetyenziselwa ukunyanga ukungasebenzi kakuhle kwe-erectile. Ezinye izibonelelo ze-avanafil zibandakanya into yokuba isebenza ngokukhawuleza kunawo onke amanye amayeza asetyenziselwa unyango lwe-ED. Ungayithatha imizuzu elishumi elinesihlanu ngaphambi kokuba ulale ngesondo kwaye isasebenza.
Olunye uncedo lwe-avanafil kukuba awunyanzelekanga ukuba uyithathe yonke imihla ukuze usebenze, ungayithatha njengoko uyifunayo. I-Avanafil inyamezeleka kakuhle ngumzimba kwaye inokuthathwa kunye okanye ngaphandle kokutya. I-Avanafil ayinazo iziphumo ebezingalindelekanga ezininzi njengamanye amayeza e-ED, kwaye ungayithatha emva kokusela utywala.
Unyango lwe-ED yenye ye I-avanafil isebenzisa. Le mveliso isetyenziselwa ukunyanga imeko kaRaynaud, ukuphazamiseka okukhokelela kwinxalenye ethile yomzimba ukuziva ubanda kwaye undindisholo. Into kaRaynaud yenzeka xa kukho ukuhla kwegazi kuye emzimbeni, njengempumlo, amadolo, iingono, iinzwane neendlebe. Le meko ikwabangela utshintsho kumbala wolusu.
Ungazuza njani ngakumbi kwiAvanafil
I-Avanafil iya kukunceda ufumane ulwakhiwo, kodwa oko akuthethi ukuba ungasusa umdlalo ongaphambili. Ke ngaphambi kokuba ubelane ngesondo, zibandakanya neqabane lakho ngaphambili ngendlela efanayo obuya kwenza ngayo ngaphandle kokuthatha iyeza. Khumbula ukuba i-avanafil iya kukunceda kuphela ukuba ufumane ulwakhiwo xa uvuswe ngokwesondo.
Musa ukusela utywala obuninzi ngaphambi kokuba usebenzise i-avanafil. Utywala obuninzi bunokuthintela ukuba ungakonwabeli ukusebenza kwe-avanafil ngokupheleleyo. Ukudibanisa utywala kunye ne-avanafil kunokubangela iziphumo ebezingalindelekanga ezinje ngesiyezi esiya kunciphisa ukuqhuba kwakho ngokwesondo kunye nokusebenza.
Kunqabe ukusela i-grapefruit juice kungaphelanga iiyure ezingama-24 oceba ukuthatha i-avanafil kwaye ulalane. Ijusi yamagilebhisi iqulethe iikhemikhali ezithile eziza kunyusa amanqanaba e-avanafil kwigazi lakho kungoko unyusa amathuba okuba ube neziphumo ebezingalindelekanga.
Hlonipha ukuqeshwa kwakho nomboneleli wezempilo ukuze abeke esweni inkqubela yakho. Ukuba uyasilela ukufumana ulungiso nasemva kokuthatha i-avanafil kunye nokuzibandakanya kwi-foreplay, okanye ukuba ufumana ulwakhiwo, kodwa aluhlali ixesha elide ngokwaneleyo ukuba ubelane ngesondo kwaye ufikelele kwi-orgasm, kuya kufuneka wazise ugqirha wakho.
Kuyafana ukuba i-avanafil ibonakala inamandla kakhulu kuwe; xa ulwakhiwo lwakho lubonakala lungapheli emva kokuba ugqibile ngesondo. Yazisa ugqirha wakho malunga noku ukuze anciphise idosi yakho. Kwakhona, khumbula ukuba ungathathi ngaphezulu i-avanafil kunokuba ugqirha ugqirha.
Sebenzisa iAvanafil (Stendra)
Ukuze i-avanafil isebenze, inokukunceda ukuyithatha njengoko kumiselwe ngugqirha. Ugqirha uza kukuxelela ukuba ungathatha malini kwaye ngawaphi amaxesha.
Njengamanye amayeza e-erectile dysfunction, i-avanafil kulula ukuyisebenzisa. Iyeza liza ngomgubo okanye ipilisi. Kuba i-avanafil isebenza ngokukhawuleza, kuya kufuneka uyithathe phakathi kwemizuzu engama-15 ukuya kwengama-30 ngaphambi kokuba ubelane ngesondo. Ukuba ugqirha wakho ukumisele idosi ephantsi ye-avanafil, yithi i-50mg ngosuku, kuyacetyiswa ukuba uthathe ichiza hayi ngaphantsi kwemizuzu engama-30 ngaphambi kokuba ubelane ngesondo. Yeyona ndlela ilungileyo yokuqinisekisa ukuba umzimba wakho uwuthatha ngokupheleleyo amayeza. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ungathatha i-avanafil powder xa ulambile ayizukuchaphazela umzimba wakho.
Kucetyiswa ukuba uthathe eli yeza kube kanye ngemini. Umboneleli wakho wezononophelo lwempilo uya kujonga indlela umzimba wakho uphendula ngayo kunyango kwaye unokuhlengahlengisa idosi ukuze ufumane izibonelelo ezipheleleyo ze-avanafil.
Ukuba liyeza likagqirha, kuya kufuneka uthethe nogqirha wakho akunike amayeza ngaphambili avanafil bathenge. Ugqirha uya kukubuza imibuzo eliqela kwaye, ukuba kunokwenzeka, yenza uvavanyo ukuze uncede uqonde ukuba yeyiphi idosi ye-avanafil efanelekileyo kuwe ngokuxhomekeke kububanzi bakho. impilo, ubudala, kunye namanye amayeza onokuthi uwasebenzise. Namathela kwi-avanafil isebenzisa ngokolwazi olukwileyibhile yemveliso okanye njengoko kubonisiwe ngugqirha wakho. Khumbula ukuba i-avanafil ayinyangi iimeko zonyango ngaphandle kwe-ED kunye ne-Raynaud's phenomenon.
I-Avanafil ifumaneka kumandla amathathu ahlukeneyo: 50, 100, kunye ne-200mg. Kungenzeka ukuba ugqirha wakho uza kukuqala ngamandla e-100mg, kodwa unokutshintsha idosi ngokuxhomekeke kwindlela ophendula ngayo umzimba wakho. Qho xa uthenga i-avanafil powder, jonga ileyibhile ukuqinisekisa ukuba unamandla afanelekileyo omiselweyo.
Uvavanyo lwe-ED kufuneka lubandakanye uvavanyo olupheleleyo lonyango ukufumanisa ukuba ngaba zikhona izizathu ezingunobangela, kunye nokumisela ezinye iindlela zonyango. Umzekelo, indibaniselwano yemicimbi yengqondo neyomzimba inokubangela i-ED.
Ezinye zeemeko zomzimba zicothisa impendulo yesondo ekhokelela kuxinzelelo olunokuchaphazela ukusebenza ngokwesondo. Xa ezi meko zinyangwa, ukuqhuba ngokwesondo kunokubuyiselwa. Izizathu eziqhelekileyo zomzimba ze-ED zibandakanya:
I-atherosclerosis (imithambo yegazi evalekileyo)
Isifo seMetabolic syndrome - Le yimeko apho kukho ukonyuka koxinzelelo lwegazi, amanqanaba e-insulin, icholesterol, kunye namafutha omzimba.
Isifo sikaPeyronie - ukuba izicwili ezibomvu zikhula kwilungu lobudoda
Utywala kunye neziyobisi / iziyobisi
Ukulimala okanye ukuhlinzwa kwintambo yomgogodla okanye kwindawo ye-pelvic
Unyango olwandisiweyo lweprostate okanye umhlaza webele
Ingqondo idlala indima enkulu ekuvuseleleni ngokwesondo. Izinto ezininzi ezichaphazela ukukhuthazwa ngokwesondo ziqala kwingqondo. Unobangela wengqondo we-ED ubandakanya:
Ixhala, uxinzelelo, okanye ezinye iimeko ezichaphazela ingqondo impilo
Iingxaki zobudlelwane ezibangelwa kunxibelelwano olubi, uxinzelelo, okanye ezinye izinto ezixhalabisayo
Ubomi besondo obungonelisiyo
ukuzithemba okuphantsi okanye iintloni okanye
Ukungakwazi ukumitha iqabane lakho
Ngaphambi kokuba umboneleli wakho wezempilo amisele i-avanafil kuwe, akazukujonga kuphela le micimbi ingentla, kodwa noku kulandelayo:
Ukuba unayo imeko yentliziyo esele ikhona, unokuba semngciphekweni wentliziyo xa usabelana ngesondo. Ngesi sizathu, unyango lwe-erectile dysfunction usebenzisa i-avanafil alukhuthazwanga kwabo banesimo sentliziyo.
Izigulana ezinee-ventricles zasekhohlo ezithintelweyo okanye abo banesiphene kulawulo lwe-autonomic uxinzelelo lwegazi banokuchaphazeleka kwi-Stendra nakwamanye ama-vasodilator.
Abanye abasebenzisi be-PDE5 baxele ulwakhiwo oluhlala ngaphezulu kweeyure ezine. Abanye baye baxela ii-erections ezibuhlungu ezihlala ngaphezulu kweeyure ezintandathu (ukubaluleka). Ukuba ufumana nayiphi na kwezi meko, kuya kufuneka ufune unyango olukhawulezileyo. Kungenxa yokuba izicwili zakho zepenile zinokonakala xa ulibaziseka kwaye ungaphulukana namandla akho ngokusisigxina.
Izigulana ezinokukhubazeka kwe-penile anatomical (isifo sikaPeyronie, ukubola, okanye ukubonwa) kufuneka zisebenzise i-avanafil ngononophelo olukhulu. Ngokunjalo, ezo zigulana zineemeko ezinokubangela ukungakhathalelwa kufuneka zilumke xa zisebenzisa i-avanafil.
Ukuba ufumana ukulahleka kombono ngexesha lokusebenzisa iStendra okanye nayiphi na inhibitors yePDE5, kuya kufuneka wazise ugqirha wakho ngokukhawuleza ukuze ufumane unyango olufanelekileyo.
Ukuphulukana nombono kunokuba ngumqondiso we-NAION, imeko eyenzeka kwabanye abantu abasebenzisa i-PDE5 inhibitors. Ukusuka ezininzi uphononongo lweAvanafilUya kuqaphela ukuba le yimeko yarhoqo, kodwa kuya kufuneka uyazi.
Le yenye imeko enqabileyo enxulunyaniswa ne-PDE5 inhibitors. Ukuba usebenzisa i-avanafil kwaye ufumana ilahleko ngequbuliso okanye ukunciphisa ukuva, yazisa ugqirha ngokukhawuleza. Ukuphulukana nokuva kuhlala kuhamba kunye nesiyezi okanye i-tinnitus, kodwa ayicacanga into yokuba ezi mpawu kufuneka zivele kwi-PDE5 inhibitors.
Kuphezulu koogqirha ukumisela oyena nobangela wezi mpawu, kodwa ukuba uthe wazifumana, kuya kukunceda ukuba uyeke ukuthatha i-avanafil de ufumane isifo esifanelekileyo kugqirha.
Iziphumo ezibi zeAvanafil
UStendra ngu Khu selekile, amayeza asebenzayo aneziphumo ebezingalindelekanga ezimbalwa, akukho nanye exhaphakileyo. Umzekelo, iintloko, eyona nto ixhaphakileyo ye-Stendra, ichaphazela kuphela iipesenti ezintlanu ukuya kwi-10 yepesenti yamadoda asebenzisa amayeza.
Olunye umphumo oqhelekileyo wecala le-avanafil ligungxula. Ukusuka kuvavanyo lwe-avanafil, kufunyenwe ukuba le meko yenzeka phakathi kwe-3 - 4% yabasebenzisi. Intloko kunye nokugungxula kweziphumo zempembelelo ye-avanafil ekuhambeni kwegazi kwaye ezi ziphumo zihlala zaphela emva kweeyure ezithile. Ezinye iziphumo ebezingalindelekanga ze-avanafil zibandakanya ukuxinana kwempumlo, iimpawu ezibandayo (nasopharyngitis), kunye nentlungu yomqolo. Zonke ezi ziphumo ebezingalindelekanga ze-avanafil zivela kwipesenti encinci yabasebenzisi.
Apho unokuthenga khona iAvanafil
Ingaba uyakufuna u thenga i-avanafil? Ukuba kunjalo, kuya kufuneka ukhethe umthengisi othembekileyo we-avanafil onokukuqinisekisa ukuba i-avanafil powder oyithengayo ikumgangatho ophezulu. Singumthengisi onjalo. Sivelisa iimveliso zethu ngokuthe ngqo kwi-CMOAPI, umenzi owaziwayo we-avanafil.
I-CMOAPI ivelisa hayi i-avanafil kuphela kodwa nezinye iziyobisi ze-erectile dysfunction. Sukuba nexhala ngexabiso le-avanafil. Sifuna ukusebenzisana nawe ukuze sikubonelele nge-avanafil iminyaka emininzi. Kungenxa yoko le nto iindleko zethu ze-avanafil ziluncedo kakhulu epokothweni.
"I-FDA ivuma iStendra yokungasebenzi kakuhle kwe-erectile" (Ukukhululwa kweendaba). Ulawulo lokutya kunye neziyobisi (FDA). Epreli 27, 2012.
"Spedra (avanafil)". IArhente yamaYeza yaseYurophu. Ukufunyanwa kwe-17 ka-Epreli 2014.
I-US 6797709, Yamada K, Matsuki K, Omori K Kikkawa K, "Aromatic nitrogen-containing 6-membered compounds cyclic compounds", ekhutshwe nge-11 kuDisemba 2003, eyabelwe iTanabe Seiyaku Co
"IVIVUS Yazisa nge-Avanafil Partnership neMenarini". IVivus Inc.Igcinwe kwindawo yokuqala kwi-2015-12-08.
“IVIVUS neMetuchen Pharmaceuticals Yazisa ngesiVumelwano seLayisensi yamaLungelo oRhwebo kwi STENDRA”. Vivus Inc. 3 Oktobha 2016.
I-2021 Isikhokelo esinegunya lokunyusa isini ngokunyanga ukungasebenzi kakuhle kwe-Erectile (ED).